ASUS प्रोआर्ट स्टुडियोबुक १ creat, सिर्जनाकर्ताहरू माग गर्नका लागि ल्यापटप ग्याजेट समाचार
ASUS प्रोआर्ट स्टुडियोबुक १ 15, सिर्जनाकर्ताहरू माग गर्नका लागि ल्यापटप
पारम्परिक कम्प्युटर र ल्यापटपले स्पष्ट कारणका लागि उनीहरूको बिक्रीको सन्दर्भमा हालैका महिनाहरूमा एक नयाँ बढावा लिएको छ, यसले धेरै प्रयोगकर्ताहरूलाई ल्यापटपलाई कार्य औजारको रूपमा लिने बनाएको छ जसमा उनीहरूले सामान्य भन्दा बढी केही माग गर्न सक्दछन्, र त्यो आउने अन्तर हो। दायरा कभर गर्न Asus ProArt स्टूडियोबुक।
हामीसँग हालसालै विश्लेषण तालिकामा छ Asus ProArt स्टुडियोबुक १ 15, एक अविश्वसनीय स्क्रिन र प्रस्ताव गर्न धेरै संग सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको लागि एक उपकरण। हामीसँग रहनुहोस् र यस Asus उत्पादनको सबै विवरणहरू फेला पार्नुहोस्, यसको फाइदा र विपक्षसँग।
3 जडान र कूलि
4 पागलपन स्क्रिन र मिलान गर्नका लागि ध्वनि
5 प्रयोगकर्ता अनुभव र सम्पादकको विचार
हामी डिजाइन र सामग्रीको बारेमा कुरा गर्न लाग्दछौं र हामी अनिवार्य रूपमा वर्कस्टेशनको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। यस प्रकारको ल्यापटप विशेष गरी हल्का वा पातलो हुँदैन र यसले सबै तर्कहरू पनि राख्छ, हामी शीतलताको एक हिस्सा गुमाउन चाहँदैनौं र हामी उच्च प्रदर्शनको माग गर्न गइरहेका छौं। त्यसकारण, हामीले १. 1,89. 36 सेमी x 25,2 XNUMX सेमी x २ XNUMX.२ सेन्टीमिटरको खाता आयामहरू लिनु पर्छ। पहिलो नजरमा यो ठुलो देखिन्छ, विशेष गरी यदि हामी यसको आक्रामक सीधा आकार र यसको प्रमुख तल्लो रबर ब्यान्डलाई ध्यानमा राख्यौं भने उपकरण थोरै उठाएर वेंटिलेसनलाई मद्दत गर्दछ।
के तपाइँलाई यो ASUS प्रोआर्ट स्टुडियोबुक १ H H15GV मनपर्दछ? यहाँ उत्तम मूल्यमा किन्नुहोस्।
आयाम: 1,89 सेमी X 36 सेमी X 25,2 सेमी
वजन: 1,98 किलोग्राम
वजनको बारेमा हामीसँग २ किलोग्राम भन्दा थोरै छ। यो एक प्रबलित धातु चेसिस छ कि यो प्रकारको निरन्तर विस्थापनहरूको सामना गर्दछ जुन आफ्नो प्रकृति द्वारा यसलाई अधीनमा राखिन्छ। हामी पछाडिको र अगाडि कनेक्शन छ, एक सानो वेंटिलेशन स्लिट संग दुबै तर्फ र स्क्रीनको तल।
यो एक मा निर्मित छ म्याग्नेशियम मिश्र जो तपाइँ प्रीमियम महसुस गर्दछ उपकरणमा बाकसको ठीक बाहिर। यसको ब्याकलिट किबोर्डको यात्रा सही छ, र तुलनात्मक रूपमा ठूलो ट्र्याकप्याड। हामीसँग छैन कि यदि हामीसँग एक संख्यात्मक किबोर्ड छ र स्क्रीन फ्रेम को उपयोग विशेष गरी ध्यान दिईएको छैन।
हामी अब विशुद्ध प्राविधिक सेक्सनको बारेमा कुरा गर्दैछौं। एकाईमा हामीले परीक्षण गरेका छौं हामीसँग प्रोसेसर छ Gen औं जनरल इंटेल कोर i7 (9750 XNUMX XNUMX० एच) जुन २ GB16 मेगाहर्ट्जमा १D जीबीको DDR4 र्यामको साथ हुनेछ।
प्रोसेसर: इंटेल कोर i7 9750H
ग्राफ: NVIDIA RTX 2060
मेमोरी र्याम: २ जीबी DDR16
भण्डारण: 1TB SSD M.2 PCIe Gen3 x4 NVMEe (हाइपर ड्राइभ)
ब्याट्री: Cells सेलहरू (Wh4WH)
ग्राफिक सेक्सनमा जहाँ हामीले सब भन्दा चाखलाग्दो फेला पार्दछौं, NVIDIA द्वारा फेरि यसका साथ RTX २०2060० माउन्ट गर्दछ यो वर्कस्टेशनमा। यो यसरी आर्किटेक्टहरू, ध्वनि विशेषज्ञहरू र सामान्य रूपमा डिजाइनरहरूसँग लामो घण्टामा सबै त्यो सामग्रीको प्रक्रिया गर्नको लागि डिजाइन गरिएको हो।
हामी पक्कै राम्रो प्रदर्शन वर्कस्टेशनको सामना गरिरहेका छौं, हुनसक्छ हामीले १० औं पुस्ताको इंटेल कोर i7 माउन्ट गरेकोमा हामी प्रशंसा गर्दछौं उपभोग मुद्दाहरूद्वारा, यद्यपि प्रदर्शन तीव्र रूपमा वृद्धि भएको थिएन भन्ने तथ्यको बाबजुद। हामीसँग परम्परागत Asus चार्जिंग पोर्ट र एक आकार बाह्य विद्युत आपूर्ति छ।
हामी उत्पादनको अविश्वसनीय प्याकेजि mention, एक प्रकारको "फोल्डर" उल्लेख गर्न अवसर लिन्छौं जुन असूसले तपाईंलाई पहिलो सम्पर्कमा मुस्कुराएको छ।
जडान र कूलि
जडानको लागि, हामी एक वर्कस्टेशनको सामना गरिरहेका छौं, त्यस्तै Asus चाहँदैन थियो कि हामीसंग केहि कमी होस्:
१x USB-C 1.२ प्रदर्शनपोर्टको साथ (१० जीबीपीएस)
१x USB-A 1
१x USB-A 2
१x HDMI १.।
१x कम्बो अडियो ज्याक
1x RJ45 Gigabit ईथरनेट पोर्ट
यी पोर्टहरू दायाँपट्टीमा युएसबी टीज बीच वितरित गरिएको छ, र बाँया जडानहरू जहाँ बाँया पट्टि हालको आगत पनि अवस्थित छ। व्यक्तिगत रूपमा मैले HDMI र RJ45 बाट टाढा पावर इनपुट मनपर्दछ, हस्तक्षेपको कारणले होइन तर चिसो मुद्दाहरूको कारणले गर्दा त्यो क्षेत्र अत्यन्त तातो हुने झुकाव छ।
SUS ProArt StudioBook 15 H500GV> LINK खरीद गर्नुहोस्।
कूलि Regardingको सन्दर्भमा, हामीसँग एल्युमिनियम फिनहरू, दुई सक्रिय---ब्लेड प्रशंसकहरू र direct प्रत्यक्ष सम्पर्क हेटपिप्सबाट बनेको एउटा विस्थापन प्रणाली छ। क्रेकलिंग नोटबूकको आकार र प्रदर्शन मागहरू विचार गर्दै "तुलनात्मक" शान्त प्रशंसकहरूको हो। 39ddBA को बारेमा जस्तो हामीले हाम्रो विश्लेषणमा देख्यौं। म प्रशंसकहरु संग कुनै विशेष ध्वनी स्तर गुनासो फेला परेन। यस सन्दर्भमा, यो ASUS ProArt StudioBook 15 H500GV सामान्य भन्दा बढी तातो हुँदैन, त्यसैले तापक्रम चिन्ताजनक पक्ष जस्तो देखिदैन।
पागलपन स्क्रिन र मिलान गर्नका लागि ध्वनि
स्क्रिन वास्तविक आक्रोश हो, हामीसँग एक प्यानल छ १.15,6..32,62 इन्च (.XNUMX२..XNUMX२ सेमी) आईपीएस परम्परागत एलईडी backlighting र उत्सर्जन चमक को 400 nits। रिजोलुसन 4K (3840 x 2160) हो रंगको एक धेरै गहन रेंजको साथ र पाठ्यक्रम एक विरोधी प्रतिबिम्ब कोटिंग जुन पूर्ण रूपमा भेटिन्छ। हेर्ने कोणहरू धेरै राम्रो छन् र हामीसँग छ PANTONE प्रमाणीकरण डेल्टा-ई <१. 1,5 रंग सटीकता र १००% एडोबको साथ। थोरै मात्र यसको बारेमा सोध्न सकिन्छ, केवल "तर" यो स्पष्टतः यो खेल्नको लागि डिजाइन गरिएको छैन, त्यसैले हामी आफैंलाई भेट्टाउँछौं H० हर्ट्ज रिफ्रेस दर।
नतीजा एकदम राम्रो भएको छ, मलाई व्यक्तिगत रूपमा उत्पादनको सब भन्दा उल्लेखनीय बिन्दु देखिन्छ। आवाजको साथ उस्तै हुन्छ, यो शक्तिशाली र स्पष्ट छ, पर्दाको उचाईमा, जसले हामीलाई सामग्री सिर्जना गर्न मात्र अनुमति दिनेछ, तर रमाईलो पनि गर्नुहोस् यदि हामी त्यसो गर्न प्रस्ताव गर्दछौं। निश्चित रूपमा मल्टिमेडिया सेक्सनमा यो उपकरण धेरै चम्किन्छ।
म नराम्रोसँग शुरू गर्न जाँदैछु, र त्यो यो हो कि यदि हामी वर्क स्टेशनको अगाडि छौं भने म किन धेरै कुरा बुझ्दिन हामीसँग वेबक्याम वा थन्डरबोल्ट connection जडान पोर्ट छैन, ती नकारात्मक बिन्दु हुन् जुन स्पष्ट रूपमा उत्पादनको उद्देश्यको विरोधाभास हुन्छन्।
यसको अंशको लागि, हामीसँग राम्ररी परिभाषित पोइन्टहरू छन् जस्तै यसको स्क्रिनको विशाल गुणवत्ता, उत्कृष्ट वक्ताहरू, एक धेरै मौन चिसो र परम शक्ति उत्पादन सामग्री बनाउने।
संक्षेपमा, सामग्री सिर्जनाकर्ताहरूको लागि एक ल्यापटप जुन तपाईं वरिपरि मूल्यहरूको लागि किन्न सक्नुहुन्छ २,2.300०० यूरो बिक्रीको बिन्दुमा निर्भर गर्दै कोमो अमेजन वा वेबसाइट नै Asus आधिकारिक।
प्रोआर्ट स्टुडियोबुक १ 15
राम्रो निर्माण र धेरै शान्त
अविश्वसनीय प्रदर्शन र स्पिकरहरू
कार्यशालाको रूपमा राम्रोसँग कन्फिगर गरिएको छ
कुनै वेबक्याम छैन
केही हदसम्म उच्च मूल्य
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » ASUS प्रोआर्ट स्टुडियोबुक १ 15, सिर्जनाकर्ताहरू माग गर्नका लागि ल्यापटप